Ezempilo: ukuzitika ngokweqile kuqhutshwa i-dopamine | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Impilo Ukulinganisela nokungalingani
Umzimba ufuna ibhalansi ukugcina amazinga wamandla futhi ugcine zonke izinhlelo zawo zisebenza. Phakathi kwanoma yisiphi isimiso esisodwa le nqubo ibizwa i-homeostasis. Isibonelo nje, abantu abadala badinga ukulala amahora ayi-6-8 ubusuku bonke kanye nentsha idinga okungaphezulu. Badinga ukulala ukuze basize ubuchopho nomzimba ukuba uzibuyise, benze noma ikuphi ukulungisa, bahlanganise izinkumbulo futhi belapheke. Umzimba ugcina amazinga kashukela egazini, umfutho wegazi namanzi ezingeni elingaguquguquki ebangeni elincane. Lapho amasistimu amaningana exhumana futhi elawula phakathi kwawo ukugcina ibhalansi nokuzivumelanisa nezimo lapho izimo zishintsha, inqubo ibizwa kanjalo allostasis. Yisistimu eqinile yokulinganisela, ilawula izinhlelo eziningana ngesikhathi esisodwa.
Kwenzekani ngokuningi kakhulu, okuncane kakhulu noma nje amazinga afanele we-dopamine.
Singajabulela 'imivuzo' yokudla noma ubulili. Uma sesenele ngokwanele ukuhlangabezana nezidingo zethu zomzimba, ubuchopho bethu buthumela isignali satiation esitshela ukuba simise. Khona-ke singaqhubeka nezinye izinto ezidingekayo zokuphila kwansuku zonke. Uma singazinaki izibonakaliso futhi siqhubeka, singaphonsa umzimba ngaphandle kokulinganisela. Isibonelo, uma siqhubeka 'sibheka' into ethile noma ukuziphatha, indlela yokwenza isitifiketi ingagcinwa okwesikhashana. Ukukhathala kugcwele. Ngamanye amazwi, ubuchopho bethu bangase baqale ukuhumusha ukuzitika ngokweqile njengesidingo 'sokusinda'. Kungasenza sikwazi ukuqhubeka sizitholela okwesikhashana. Cabanga ngebheyi ngaphambi kokubuthwa kwebusika ebusika lapho kungagwinya i-salmon ye-20 ngesikhathi ngaphandle kokugula. Noma cabanga ngenkathi yokuxuba entwasahlobo lapho izilwane zizofuna ukutshala abashade abaningi ngangokunokwenzeka.
Isikhathi sokulinganisa asipheli
Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi zibonakala ebuchosheni njengenkathi yokukhula, kodwa isikhathi sokukhula esingapheli. Khumbula ubuchopho bethu bokuqala buguquke ngesikhathi sokuntuleka. Ubuchopho bokuqala bubona i-intanethi ye-internet njengendlela 'yokudla ukuphefumula'. Kuyithuba elikhulu lokukhululeka, okusikhombisa ukuba 'sithole ngenkathi sithola kahle'. Ngokuzibopha njalo, ubuchopho buhumusha ibhonanza engakaze ibe nakho ngaphambili njengesidingo sokusinda. Ngokushesha uzofuna ukuzivumelanisa ngokushintsha umshini we-satiation engqondweni.
Izinkampani ze-intanethi zisebenzisa ucwaningo olungcono kakhulu lwezesayensi olutholakalayo ukwenza imiklamo eyenza imikhiqizo egcina sibukele. Bona lokhu Inkulumo ye-TED ngu-Nir Eyal.
Ukunakwa kwethu kuyimodeli yebhizinisi ye-intanethi ngokusho kukaSim Tim Berners Lee, uyise wewebhu web jikelele. Inani lalo kubakhangisi lifana negolide. Ayikho into efana nomdlalo wamahhala noma ividiyo ku-intanethi. Njalo uma sicindezela okuthi 'kufana' kumithombo yezenhlalo noma ukubukela ividiyo entsha, amakhulu ezinkampani ziqoqa leyo datha futhi zakha iphrofayli kithi. Lapho siba umlutha we-intanethi, imali eyengeziwe abakhangisi abasenzayo. Ukuphuza umlutha kusho ukuthi sinakekelwa kancane futhi amandla okuchofoza atholakalayo ukuze afunde amakhono, azenzele imali noma enze umsebenzi.
Imiphumela Yengqondo >>